ikhaya » Okufumaneka » Unshackling Mocap: Hamba nge-Wireless Kwimimandla engqongileyo
Unshackling Mocap: Hamba nge-Wireless Kwimimandla engqongileyo
Rekhoda, iliso kunye Hlalutya Ukuhamba kwinqanaba lebhokisi, kwiimeko ezinzima, ngaphandle kwekhompyutha ekhoyo.
Ukukhwabanisa iteknoloji ye-Motion isisondele kakhulu kwimidlalo yevidiyo yanamhlanje, iimbonakalo ezibonakalayo kunye namafilimu efilimu ... kwaye iqalisa ukwenza amagagasi amakhulu kumdlalo ogqithiseleyo. Kodwa ungayifumana njani inkqubela yokubanjwa kwesikhala?
Khetha iingubo zakho, iipropthi kwaye usethe ngenyameko.
Ngokuqala, ngoku kunokwenzeka ukurekhoda ukunyakaza okunyanzeliswayo kwimeko nayiphi na imeko; Ukusuka kwimidlalo enamandla, ukuya kwimidlalo yemidlalo yevidiyo.
Xsens Ziye zazisa kwi-body recording pack sensors ezikwazi ukugcina idatha ehambayo ngqo kwi-hardware yomzimba, ekupheliseni isidingo seekhompyutha, iikhamera nezinye izixhobo ezinzima ezisondeleyo. Se benzisa oku. Khetha indawo efanelekileyo kunokuba ujikelele ekuhleleni emva kokuvelisa ukuzalisa i-gap.
UHein Beute, uMlawuli weNtengiso yeMveliso ku-Xsens, uyachaza: "Ngokomzekelo, unokubamba ukunyakaza komqhubi weMotocross ukususela ekuqaleni komncintiswano ukuya ekupheleni; Okanye ukuba wenza i-ergonomics kwisandla somsebenzi njengemithi yokugubha imithi, isihloko singasebenza ngokujulile kwimithi ngaphandle kwesidingo somthombo wamandla asondeleyo. I-MVN Studios i-4.4 yenza i-mocap ifinyeleleke ngakumbi kunanini ngaphambili. "
Musa ukuzilungela ngokwakho.
Chaza inkqubo ecacileyo yokubiza iimpahla zakho zokuthabatha ukunyuswa, okuya kusindisa ngokungapheliyo ixesha lokuhlaziya iiyure zegrafu ze-kinetic. Ufuna into ebandakanyekayo idatha echanekileyo: amagama kufuneka afake isibonakaliso somdlalo, umlingiswa, isenzo, kunye nenombolo yokuthatha.
Thatha ixesha elongezelelweyo ukugcina idatha ecocekileyo ngokunokwenzeka.
Kungakhathaliseki ukuba usebenza ne-optical okanye i-magnetic system, ukuphazamiseka kuya kuhlala kunokwenzeka kwaye izilumkiso kufuneka zithathwe rhoqo. Kwiinkqubo ezibonakalayo, oku kuthetha ukulinganiswa ngokukhawuleza kweendawo zombini kunye nomdlali. Kwiinkqubo zamagnetic, ukukhulula isikhala somsindo wamagnetic, ngcono umphumo.
Nangona amaninzi amanyathelo enkqubo angenziwa ngokuzenzekelayo, ukukhangela ukunyakaza kwengxolo okanye i-swaps isandla sokuqala uza kubamba ezininzi iimpawu eziphambili kwipayipi. Ukuba ifayile ingumsindo ngokukodwa, iifayile zingongezwa ekuphuculeni idatha, kodwa oku kunokunciphisa intshukumo xa isetyenziswe ngokugqithiseleyo. Ngenxa yeso sizathu, kuluvo oluhle ukudlulisela ifayile kumnye umntu ngokujonga okutsha ngaphambi kokuthumela ifayile.
Ukukhawuleza ukunyakaza ukuhamba ngesantya esicothayo kunokwimeko ekhethekileyo ekutshekeni komgangatho. Ukusebenzisa ukuphuculwa kwezobuchwepheshe zamuva, amaqela okuvelisa anokukwenza oku kusekwe kwii-smartphones zabo.
Ukufikelela kwikamva ye-photoreal
Ngokubamba ukunyakaza kwesifundo esibukhoma, besebenzisa le mivo kumlingiswa weCGI, ngokukhawuleza unqumle amaninzi emigqabini efunyenwe kwiimpawu zendalo zesiqhelo. Ukubanjwa kweso sihlandlo kwamandla amaninzi ekupheleni, iimveliso ezifana nehlabathi avatar, Final Fantasy XV kwaye FIFA. Imveliso nganye iyaziwa ngokuba yi-photoreal, isenzo esinamandla.
Enyanisweni, i-Xsens okwangoku ihlinzeka nge-mocap hardware ngezihloko ezilindelekileyo Benzi kwaye IHellblade. Ngokurekhoda komzimba okwangoku ngokukhoyo, ngokuqinisekileyo uza kubona kungekudala uluhlu olukhulu lwezemidlalo. Ukuqhubela phambili kunye noshishino lokunyanzelisa i-photorealistic human simulations, ukubetha kwesikhenketho kubaluleke kunanini ngaphambili.
Previous: Umqeqeshi we-Car Racer Uhlobo lukaDevin O'Connell lokuPhila ngokusuka kwiCockpit ngqo kwi-Facebook Kuhlala kunye ne-TVU Networks
next: I-Conferencing & Streaming Engineer
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso: "Ukungahambisani noMocap: Hamba ngeN Wireless kuyo nayiphi na imeko". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/unshackling-mocap-go-wireless-in-any-environment/. Enkosi.